I-Cottage endaweni ethule futhi eseceleni, ihora elingu-1 ukusuka eSthlm
Norrtälje S, Stockholms län, i-Sweden
Indlu encane ibungazwe ngu-Erik
Uyemukelwa ukuqasha ikotishi elincane elinendawo enkulu endaweni eseceleni ngokuphelele (ihora elilodwa ukusuka eStockholm). Lapha uthola ukuzwa imvelo, ukuthula kanye nokuthula okwehlisa ingcindezi.
Esakhiweni ungabona inyamazane, i-elk, impungushe, unogwaja futhi entwasahlobo nasehlobo ama-cranes ambalwa avame ukuvakashela indawo kanye nensimu eseduze nayo. Njengoba kukhona ichibi esizeni ungabona futhi izinyoni eziningi, isib. izidleke ze-marsh hawk eziseduze. I-Roslagsleden idlula ibanga elifushane ukusuka ekotishi futhi kunezindlela zokuhamba ezinhle endaweni ezungezile.
Esakhiweni kunendawo elungisiwe yokosa inyama lapho ungawosa khona amasoseji emlilweni ovulekile noma upheke epanini lethu lensimbi elicijile. Ezinganeni kukhona i-trampoline nemidlalo eminingana yangaphandle efana ne-cube, i-croquet, i-badminton. Kwabafisayo likhona nethuba lokuboleka isikebhe sethu. Khona-ke udinga ukuba ne-roof rack emotweni.
Ikotishi lincane (30 m²) linekamelo nekhishi, ikhishi lifakwe lokho okudingayo. Igumbi lesibili yigumbi lokulala elinombhede ophindwe kabili we-160 cm. Kukhona iziko lapha.
Phezulu kunesitezi esiphezulu esinefenisha lapho kunemibhede eminingi kumatilasi phansi. I-loft ifaneleka kahle izingane ezindadlana kancane noma umuntu omdala oshesha ukushesha (ukuphakama okumile phakathi kodwa nophahla olushelelayo, kodwa ngaphezu kwakho konke yizitebhisi zokufika lapho ezithi ukukhuphuka). Qaphela ukuthi i-loft ayigxiliwe, emva kwalokho kungabanda kancane ukulala lapho ekwindla nasebusika.
Ngemuva kwendlu kunendlu yengilazi ehlotshisiwe enokufudumala kwe-infrared lapho ungahlala khona uma lina noma ngoba nje ithokomele.
Endlini kukhona amanzi ashisayo neshawa. Indlu yangasese iyindlu yangasese yangaphandle esizeni.
Cishe ikhilomitha elingu-1 ukusuka ekotishi kukhona ipulazi lapho ungathenga khona ubisi. Indawo yokugeza engcono kakhulu ngokubona kwethu iseLake Largen lapho kuthatha cishe imizuzu eyi-15 ngemoto.
Cishe amakhilomitha angama-70 ukuya eStockholm futhi cishe amakhilomitha angama-30 ukuya eNortälje. Isitobhi sebhasi siyikhilomitha elingu-1 ukusuka ekotishi.
Ukuze uthole ulwazi, sinekati elivame ukuhamba nathi lapho sikhona, ngakho-ke kungase kube khona iminonjana yekati ku-cottage.
Omakhelwane abaseduze bangabahlali baphakade.
Iyatholakala engxoxweni nasefonini. Phila ihora ukusuka endlini encane ukuze ufike lapho kuphela uma kunesimo esiphuthumayo.